Hoos u dhigista Kharashaadka Silsiladda Sahayda ee Hawada Aerospace iyo Difaaca
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Hoos u dhigista Kharashaadka Silsiladda Sahayda ee Hawada Aerospace iyo Difaaca
Boostada martida • Adeegyada Warka
Silsiladaha sahayda Aerospace iyo Difaaca (A&D) ayaa wajahaya xilli gaar ahaan adag.
Faafida COVID-19 ayaa jilbaha u gelisay dhammaan wershadaha duulimaadyada, taasoo ka dhigeysa soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha inay si isku mid ah u laalaadaan si ay ugu laabtaan heerarka wax-soo-saarka caadiga ah.
Dawladaha oo ka jawaabaya dhaqaalaha curyaamiyay, waxay hoos u dhigeen kharashkii ay ku bixin jireen A&D xagga qalabka milateri.
Ganacsiyada gaarka loo leeyahay, ayaa tallaabo taas la mid ah, waxay yareeyeen kharashaadka ku baxa qalabka hawada sare.
Isbeddelkani wuxuu reebay shirkado badan oo aan haysan wax lagu kalsoonaan karo lammaanaha silsiladda sahayda aerospace gariiraya. Laakiin ma aha oo kaliya silsiladda sahayda A&D ee dhibban. Maamulka Biden ayaa dhowaan sameeyay qiimayn 100 maalmood ah silsiladaha sahayda muhiimka ah. Natiijooyinku waxay muujiyeen daciifnimo kala duwan ee warshadaha silsiladda sahayda.
Mareykanka ayaa hoos uga dhacay 37 boqolkiiba wax soo saarka semiconductor -ka adduunka ilaa 12 boqolkiiba 20kii sano ee la soo dhaafay. Maraykanku hadda wuxuu soo saaraa 6 ilaa 9 boqolkiiba oo keliya oo ah jajabyada macquulka ah ee qaangaarka ah, teknolojiyadda semiconductor -ka horumarsan. Sida uu madaxweynuhu sheegay, boqolleydaas hoose “waxay halis gelineysaa dhammaan qeybaha silsiladda sahayda semiconductor-ka iyo sidoo kale tartankeenna dhaqaale ee muddada-dheer.”
Hoos u dhaca qiimaha ayaa horseeday in maamulka Biden uu ku dhawaaqo “xoog shaqo joojin”, oo ay madax ka tahay Wakiilka Ganacsiga ee Mareykanka Katherine Tai, kaas oo “soo jeedin doona tallaabooyin fulin dhinacyo badan leh oo dhinacyo badan leh oo ka dhan ah dhaqammada ganacsi ee aan caddaaladda ahayn ee baabi’iyey silsiladihii sahayda ee muhiimka ahaa.”
Maadaama labada daneeye ee dawladda iyo kuwa ganacsigu ay diiradda saarayaan hab wax-ku-ool ah oo lagu qancinayo baahidooda aerospace, soo-saareyaasha A&D waxay u baahan yihiin inay yareeyaan kharashaadka si ay u helaan heshiisyo ayna u ilaaliyaan dariiqyada faa'iidada.
Waa kuwan tallaabooyin lagu caawinayo kuwa yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah duulista soo -saareyaashu waxay saamayn ku yeelan karaan hagaajinta silsiladda sahayda si loo yareeyo kharashyada:
1. Digitize silsiladda sahayda
Qaabka silsiladda sahayda caadiga ahi wuxuu u shaqeeyaa si toos ah, oo siyaasad -dejiyayaashu waxay sida caadiga ah leeyihiin aragti cidhiidhi ah oo ku saabsan silsiladda sahayda guud, taasoo horseedaysa haqab -beel suurtogal ah iyo kharashaad kordhay.
Silsiladda sahayda digitized ah, si kastaba ha ahaatee, waxay bixisaa aragti dhammaystiran oo ku saabsan silsiladda sahayda si loo caddeeyo, iskaashiga, dabacsanaanta, iyo jawaabaha degdegga ah. Si fudud haddii loo dhigo, digitization -ku waxay adeegsataa xogta si loo hagaajiyo silsiladaha sahayda.
Isku -darka xogta dhammaan silsiladda sahayda oo dhan waxay gacan ka geysaneysaa wanaajinta silsiladda sahayda iyada oo la abaabulayo lana go'aaminayo meesha ugu dambaysa ee sahaydu ay ka jirto ka -qaybgalka dadka oo kooban.
Tusaale ahaan, barnaamijyada wax-iibinta, nidaamyada ilaalada, wax-soo-saarka agile, sirdoonka macmalka ah, iyo mashiinnada kale ee is-xakamayn kara ayaa lagu dari karaa qaab-dhismeedka silsiladda sahayda ee nidaam deg-deg ah oo dabacsan.
Si aad u gaarto digitization -ka silsiladdaada sahayda, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad iskaashi la yeelato shirkad maareynta silsiladda sahayda caalamiga ah. Waxaa jira dookhyo badan gudaha Maraykanka. Tilmaan -bixiyahan wuxuu liis gareynayaa shirkadaha maaraynta silsiladda sahayda ee ugu fiican kuwaas oo ka hawlgala aerospace iyo waaxaha difaaca.
2. Ka Faa'iidayso Agabyada Qiimaha
Fahamka kharashaadka alaab -qeybiyeyaasha iyo sicirka silsiladda sahaydu waxay ka caawiyaan soo -saareyaasha Aerospace iyo Difaaca inay helaan qiimayaal macquul ah amarradooda. Soo -saareyaasha badankoodu waxay u malaynayaan in kharashyada alaab -qeybiyuhu ay go'an yihiin. Hase yeeshee, kharashyada qaarkood waa la beddeli karaa haddii soo -saaraha uu hayo macluumaadka saxda ah. Falanqaynta qiimaha istiraatiijiyadeed ayaa ah dariiqa loo maro.
Sida laga soo xigtay Mareykanka Xeerka Qaadashada Federaalka (FAR) 15.407-4, falanqaynta qiimaha istiraatiijiyadeed waa inay qiimeysaa “dhaqaalaha iyo hufnaanta shaqaalaha qandaraaslaha ee hadda jira, hababka, agabka, qalabka, hantida dhabta ah, nidaamyada hawlgalka, iyo maamulka.”
Waxaan kugula talineynaa laba nooc si loo go'aamiyo nidaamka qiimeynta cadaaladda ah:
Qaabka Qiimaha Looga Baahan Yahay: Qaabkan, qandaraasluhu wuxuu adeegsadaa qiimeynta suuqa ganacsiga iyo dhaqaalaha si loo go'aamiyo qiimaha suuqa ee caddaaladda ah. Qaabkani ma tixgeliyo alaab -qeybiyeyaasha oo weydiinaya qiimo laakiin wuxuu ogaadaa waxa badeecadu tahay inay ku kacdo iyadoo lagu saleynayo arrimo ay ka mid yihiin alaabta ceyriin, kharashaadka sare, shaqada, iyo sicir bararka.
Falanqaynta Jeexdin: Falanqaynta jeexjeexa waxay u kala jajabisaa badeecad qaybo yar yar si ay u qeexdo qiimayn ama qiimayn qayb kasta sida waafaqsan hawlgalkeeda. Marka laga reebo naqshadeynta warshadaha, qalabkani wuxuu qiimeeyaa kartida, adkaysiga, waxsoosaarka, kalsoonida, amniga, iyo astaamaha kale ee lagu dabaqi karo.
Baro wax badan oo ku saabsan adeegsiga aaladaha kharashka ee maqaalkani.
3. Liisaska hubinta iyo Qalabka
Ururadu waa inay sidoo kale soo saaraan liis -hubinta tusaalaha iyo aaladaha agaasimayaasha si ay u adeegsadaan ka hor inta aysan iibsan. Liisaska hubinta ee noocan ahi waxay tilmaami doonaan talooyin sida haddii soo-saaraha uu leeyahay qayb miisaaniyadda u habboon laakiin qaban karta isla shaqadii.
Aaladuhu waxay noqon karaan garaafyo iyo xaashiyo shaqo oo ka caawiya agaasimaha inuu si dhakhso leh u abuuro halbeeg waxqabad, u -soo -uruuriyo qiimaha xubnaha iyo ganacsatada kale, iyo inuu baaro isbeddellada suuqa.
Agaasimayaashu waa inay aragti cad ka yeeshaan baahiyaha iyadoon loo eegeyn haddii alaab -qeybiyuhu dalbado tirada ugu yar ee dalabka. Ujeeddadu waa inaysan ahayn oo kaliya in laga fogaado dhammaystirka qayb laakiin sidoo kale la yareeyo alaabada.
4. Si Wax -ku -ool ah ula xaajood bixiyeyaasha
Dad badan oo Aerospace iyo Difaaca shirkaduhu waxay rumaysan yihiin inaysan lahayn awood ku filan oo ay ku qanciyaan ganacsatadooda si ay u yareeyaan sicirka, gaar ahaan ganacsatada qotada dheer ee ku xiran barnaamijyada waaweyn.
Shirkadahaani waxay marka hore ka tanaasulaan ciyaarta ka hor inta aysan xitaa bilaaban. In kasta oo wada xaajoodyadu aysan ahayn socod beerta dhexdeeda, haddana waxaa jira habab dhowr ah oo shirkadaha Aerospace iyo Difaaca ay isticmaali karaan si loo hagaajiyo kharashka.
Go'aanso bartilmaameedka la difaaci karo
Soo -saareyaasha badankood badiyaa ma laha dareen yar oo ku saabsan dhaqaalaha aasaasiga ah ee qayb ka mid ah alaab -qeybiye la siiyay. Sidaa awgeed, tallaabada ugu horreysa ayaa ah in la soo saaro qiime bartilmaameed sax ah oo ku saabsan waxa ay tahay in xubinta wax -ku -oolka ahi ku kacdo. Shirkaduhu waxay dalban karaan dhowr waji si arrintan loo gaaro.
Shirkaduhu waxay eegaan sida qiimaha alaab-qeybiyuhu u leeyahay qayb gaar ah uu hoos ugu socdo qalooca qiimaha ee xagga kore. Qalabka aadka u casriyeysan, badeecada ugu horreysa ee la dhammeeyo ee ka baxsan khadka shirka ayaa qiimaheedu aad uga badan yahay boqolleyda, taas oo iyana kharashkeedu aad uga badan yahay kunka.
Heerka hoos -u -dhaca ee wadarta qiimaha nidaamka ayaa ah xiriir caadi ah oo u dhexeeya tirada wax -soo -saarka ee shirkad iyo qiimaha wax -soo -saarka. Marka la eego tirada cutubyada, nooca isu-imaatinka loo baahan yahay, iyo qiimaha bilowga bilowga ah, qalooca kharashku wuxuu muujinayaa waxa ay tahay in ganacsadaha aadka loo qiimeeyo uu dalbado ka dib tiro cayiman.
Waxaa jira habab kala duwan oo xagga hoose ah si loo go'aamiyo qiimaha bartilmaameedka. Habka qaab-dhismeedka badeecaddu wuxuu ku lug leeyahay fiirinta qaybaha hoose ee makiinado. Kuwaas badiyaa waxaa laga helaa suuqa xorta ah, shirkaduhuna waxay go'aamin karaan qiime ku habboon mid kasta oo ka mid ah, oo ay weheliso kharashaadka shaqada si laysugu geeyo.
Shirkaduhu waxay kaloo eegi karaan qiimaha qaybaha la midka ah ee leh astaamaha la xiriira. Midkoodna hababkaan midkoodna waa nacasnimo, laakiin iyadoo la adeegsanayo dhammaantood, shirkaduhu waxay horumarin karaan baaxad u leh qiimaha bartilmaameedka saxda ah ee qayb go'an. Taasi waxay siinaysaa asbaab lagu kalsoonaan karo oo la qiyaasi karo si ay ula gorgortamaan alaab -qeybiyaha si loo yareeyo kharashyada.
La samee alaab -qeybiyaha dhibco ka -qaadis
Hab kale oo aad si wax ku ool ah ula gorgortami karto alaab -qeybiyeyaasha ayaa ah in la fahmo aagagga suurtagalka ah ee leverage. Xaaladaha badankood, shirkaduhu waxay heli karaan awood aad uga badan inta ay u malaynayaan iyagoo adeegsanaya xogta la heli karo meelaha qaarkood. Marka hore, si kastaba ha ahaatee, Soo -saareyaasha Qalabka Asalka (OEMs) waxay u baahan yihiin inay fahmaan sida alaab -qeybiyeyaasha ay macaashkooda u helaan iyo sida dakhliyadaasi ay u janjeeraan inay kordhaan muddo.
Tusaale ahaan, alaab -qeybiyeyaasha qaarkood ayaa inta badan lacagtooda ka iibiya OEM -yada iyagoo qayb ka ah heshiiskii asalka ahaa ee nidaamka. Qaar kale ayaa wax badan sameeya iyaga oo si toos ah uga iibiya dawladaha ama caalamka ama dawladdooda.
Wali, qaar kale waxay xooga saarayaan wixii ka dambeeyay iibinta qalabka dayactirka ee mashiinada oo waqti sii dhammaanaya. Marka la fahmo qorshaha shirkadda alaab -qeybiyaha, shirkaddu waxay go'aamin kartaa sida ugu wanaagsan ee loola xiriiri karo alaab -qeybiyaha si loo dhiso awood -siinta inta lagu jiro wada -xaajoodka.
Sebastian Samuel wuxuu leeyahay,
Oktoobar 6, 2021 at 10: 25
Tusaale ahaan, alaab -qeybiyeyaasha qaarkood ayaa inta badan lacagtooda ka iibiya OEM -yada iyagoo qayb ka ah heshiiskii asalka ahaa ee nidaamka. Kuwo kale ayaa wax badan sameeya iyagoo si toos ah wax uga iibiya dawladaha caalamka ama dawladooda. Waad ku mahadsan tahay wadaagista macluumaadkan.